Madaxwayne Ku Xigeenka Somaliland Oo Shahaadooyin Guddoonsiiyay Arday Ka Qalinjabiyey Jaamacadda New Generation Ee Hargeysa + SAWIRRO | Salaan Media
Madaxwayne Ku Xigeenka Somaliland Oo Shahaadooyin Guddoonsiiyay Arday Ka Qalinjabiyey Jaamacadda New Generation Ee Hargeysa + SAWIRRO
October 6, 2013 | Published by: Hamse
Oct 6, 2013 Hargeysa(SM)– Madaxwayne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa maanta ka qayb-galay Munaasibad balaadhan oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay dufcaddii koowaad ee ka qalin-jabisa Jaamacadda New Generation College laanteeda Hargeysa. Kuwaasi oo tiradoodu dhamayd 59 arday.
Munaasibadda loo qabtay ardayda ka qalin-jabisay Jaamacadda New Generation University College, ayaa waxa kale oo ka qayb-galay Wasiirro tiro badan oo ay ka mid ahaayeen Madaxtooyada, Arimaha gudaha, Arimaha bulshada, ku xigeenka Wasaaradda Warshadaha iyo Masuuliyiin kale oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha golaha Wakiilada Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), Safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya dalka Somalilad, Maamulka Jaamacadda, Ardayda iyo Waalidiin.
Maamulaha Jaamacadda New Generation Faraceeda Magaalada Hargaysa Muuse Aadan Axmed, oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Jaamacaddu, waxaanu sheegay in ardaydani yihiin dufcaddii koowaad ee ka qalin-jabisa Jaamacadda isla-markaana dhan yihiin 59 arday oo isugiu jira rag iyo dumar bartay afar kulimadood oo jaamacaddu bixiso.
Sidoo kale, waxa uu tilmaamay in jaamacadda New Generation ay kor u qaaday magaca Somaliland, ka dib buu yidhi markii ay isla ardayda Munaasibada qalin jabinta loo qabtay ay ku soo qalin jabiyeen xarunta Midowga afrika ee Addis Ababa iyagoo wata Magaca wadankooda iyo calankiisiiba.
Wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada Somaliland Maxamuud Axmed Bare (Garaad), oo isna halkaasi ka hadlay ayaa amaanay ardayda iyo Jaamacadda New Generation labadaba, isaga oo si gaar ah carabta ugu adkeeyay muhiimada waxbarashada iyo tacliinta sare ee ay dalka iyo dadkaba u leedahay.
Wasiir Garaad, waxa uu halkaasi ka soo jeediyay weedho uu dhalinyarada ugaga digay Tahriibka oo uu ku tilmaamay aafo loo baahan yahay in la dagaalankeeda meel looga soo wada jeedsado.
Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Cali Maxamed Waran- Cade, ayaa isaguna hambalyo u diray ardayda qalin-jabisay oo ay ku jiraan wariyayaal caan ka ah Somaliland, waxaanu bogaadin iyo dhiirigalin u soo jeediyay Maamulka Jaamacadda New Generation oo uu tilmaamay inay ku tabceen dhalinyarada maanta qalin-jabisay.
Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland Md Xisri Cali Xaaji Xasan Iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ardayda qalin-jabisay, waxayna kula dardaarmeen inay halkaasi ka sii wadaan oo aanay joojin.
Labada masuul, waxa kale oo ay amaan iyo bogaadin u jeediyeen Maamulka Jaamacadda New Generation oo ay sheegeen inay sharaf u soo hooyeen jiritaanka iyo Madax-banaanida Somaliland markii ay ardayda Maanta Munaasibadda loo sameeyay ay Munaasibad tan la mid ah ugu qabteen xarunta Midowga Afrika ee Magaalada Addis-ababa.
Ugu Dambayn, waxa halkaasi hadalo dardaaran ah ka soo jeediyay isla-markaana ardayda shahaadooyinkoodii guddoonsiiyay Madaxwayne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici)